Posted by ကလိုစေးထူး at 11:01 PM
Sep 17, 2008, 11:29:00 PM
ကိုစေးထူး… တကယ်က ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ဂရုဏာတရားက နှလုံးသားထဲမှာ အရင်ရှိပြီးသားပါ… အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် နှလုံးသားတွေ အနာတရဖြစ်တဲ့အခါ ထွက်ပေါက်တွေ မရှိတဲ့ အခါ ဒီလိုပဲ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်…
ကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက လူက ရင့်ကျက်စေတယ်လို့ ဒီစာက ပြောနေသလိုပါပဲ။
Sep 18, 2008, 1:36:00 AM
စာတွေကိုဖတ်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။ စာတွေဖတ်လိုက်တိုင်း အတွေးလေးတွေ ရပါတယ်။ အားပေးနေပါတယ်။
Sep 18, 2008, 3:35:00 AM
ဟုတ်တယ်ဗျ တခါတခါ စိတ်ကအဲလိုပါပဲ။ တအားမုန်းတယ်ဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်းရက်စက်ဖို့ကြလည်း မလုပ်ရက်တတ်ဖူးလေ။ အစ်ကိုရေ အစ်ကိုလေးစားတဲ့လူကိုလည်း မသေစေချင်သေးပါဘူး။ သူ့ပေးဆပ်မှုအတွက် ထိုက်သင့်တဲ့ အောင်မြင်မှုလေးရသွားစေချင်ပါတယ်ဗျာ...
Sep 18, 2008, 6:11:00 AM
ကျွှန်တော်ကတော့ ခင်းဗျားရဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်သက်သက်ပါ, ခင်းဗျားရဲ့ စိတ်ဓါတ်က်ုလေးစားပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့ မှာ ခင်ဗျားထားတဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုး ဆယ်ပုံ ပုံတစ်ပုံသာရှိခဲ့ရင်?
Sep 18, 2008, 8:14:00 AM
ဒီတစ်ခါတော့ မောင်သတိလည်း စိတ်လေတယ်ဗျာ..
ကိုစေးထူးဟာ ဘာလို့ ကျွန်တော်ဟာ ကိုယ်လိုတာကို ဆွဲဆွဲကောက်ချက်ချသွားတယ်လို့ အမြဲယူဆပါလိမ့်.. အင်း.. ပြောင်မြောက်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အရေးအသားကြောင့် ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်.. ဟဲဟဲ
ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းတယ်.. ငါအမြဲမှန်တယ်လို့ လက်မခံပါဘူးဆိုတာ လူတိုင်း လွယ်လွယ် ပြောနေကျစကားပဲ.. ကိုယ့်ဘာသာ ဒီလိုတကယ်နားလည်လက်ခံဖို့ဆိုတာ အရမ်းခက်ခဲလွန်းပေမဲ့ လူတိုင်းလိုလိုဟာ ဒါကို အဲဒီခက်တာနဲ့ မကာမိလောက်အောင်ကို လွယ်လွယ်ပြောနိုင်ကြတယ်.. ဒါကိုကျွန်တော် အဓိကပြောချင်တာ.. ပဝေသဏီလှန်ပီး အစဖော်နေတာမဟုတ်ဘူး.. အင်း ကြားဖြတ်ကြွားရမယ်ဆိုရင်တော့ မောင်သတိ ကတော့ အဲဒီခက်ခဲတာကို လုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျ.. မှားရင်တော့လက်ခံပါတယ်.. ခုဟာက မှားမှမမှားပဲဆိုပီး အမြဲကို ငြင်းမှာပဲဗျို့.. ဟီးဟီး..
နောက်တစ်ခုက အမည်ခံကိစ္စ။ အကိုနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ တိုက်ရိုက်ကြီးဗျောင်ကျကျ ပြောလို့လဲမျက်နှာနာစရာ မရှိတဲ့ လူတွေမဟုတ်ကျတဲ့အတွက် အကိုဟာ ကျွန်တော့်ကို ဒုတိယပုံစံထဲမှာ ထားပြီးပြောနေတယ်လို့ ထင်တယ်ဗျာ.. အဲဒီမှာ အကိုဟာ ကျွန်တော့်ကိုသိနေတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ခဲ့ပေမဲ့ တခြားတစ်ယောက်ကို သွားထင်နေတယ်ဆိုတာ မြင်လာတယ်ဗျ.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ မောင်သတိဟာ ဆော်ပလော်တီးဖို့ ရုပ်ဖျက်စရာလိုလောက်အောင် လူသိများတဲ့နာမည်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်ရော အကိုရောသိတယ်ဗျာ... အဲဒီမှာ ဘာမဟုတ်တဲ့လူကို ထိမှာအားနာလာတယ်.. သူ့ဘလော့မှာလည်း ကပ်ရေးသေး သူ့ကိုလည်း ထိခိုက်သေးဆိုရင် မမိုက်ဘူးမဟုတ်လားဗျ.. တော်ကြာကန်ချရင် ကိုစေးထူးအပြစ်ပဲဗျာ.. ဟားဟား..
အဲဒါတွေထက် အဆိုးဆုံးကတော့ဗျာ.. ဟိုလူရေးသွားတဲ့ကဗျာပဲ.. တော်တော်ကို ညစ်သွားတယ်.. ကိုယ့်ကိုဖဲ့နေတာတောင် ဟုတ်တုတ်တုတ်ရှိအုန်းမယ်.. ဖြစ်နိုင်ရင် အဲလိုကဗျာကို မြန်မာစာလုံးဝိုင်းလေးတွေနဲ့ မေ၇းပါနဲ့လို့တောင် တောင်းပန်ချင်ပါရဲ့ဗျာ.. လေတယ်ဗျို့..
Sep 18, 2008, 8:59:00 AM
သွားပါတယ် ကိုစေးထူး ။ ကောင်းပါတယ် အရေးအသား
ရော တွေးခေါ်မှုအပိုင်းရော နှစ်ဘက်အမြင်ရော ။ကျနော်
တို့ အနေနဲ့ ပြင်ဆင်ရမယ့် အချက်တွေကို လည်း ခေါင်းထဲ
ရိုက်သွင်းသွားပါတယ်။ စာကောင်းပေမွန်များကို ဆက်လက်
ရေးသားနိုင်ပါစေဗျာ။ အများအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့်
Sep 18, 2008, 11:21:00 AM
ဖတ်ရကျိုနပ်တဲ့ စာပေတွေကို မျှော်နေပါတယ်။
အကျိုးရှိတဲ့ အတွေးများစွာပေးနီုင်တဲ့ စာကောင်းကောင်းများကို ဖတ်ချင်ပါတယ်
Sep 18, 2008, 11:55:00 AM
Sep 18, 2008, 3:24:00 PM
မတန်ခူးနဲ့ မချိုသင်း...၊ ပြီးတော့ ကိုရွာသားလေး...၊နားလည်ပေးကြတာကို လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုဘိုဘို...၊ လာဖတ်နေတာကို သိရလို့ အားတက်ပါတယ်။
မောင်သတိ အမည်ခံကြီးရေ...၊ ဒီတခါ ခင်ဗျား ကွန်မန့်ကို ဖတ်ရတာ ဘီယာနှစ်ဘူးစာလောက် မူးသွားတယ်၊ ဟဲဟဲ။ ကျနော်ထင်တယ်။ ကျနော်ဆိုလိုနေတာလဲ ခင်ဗျားနားလည်လောက်သလို ခင်ဗျားလာထောက်ပြတဲ့ အချက်ကိုလဲ ကျနော် နားလည်နေပြီမို့ မျဉ်းပိတ်ဖို့ အချိန်တန်ပြီထင်တယ်။ ဒီတခါ ကျနော်က အရင် ဦးအောင် အော်လိုက်မယ်ဗျာ။ တန်းဖြုတ်!!!!!!!!!
ကိုမောင်ငယ်...၊ ခေါင်းထဲ ရိုက်သွင်းရမယ့် အချက်တွေ ပါတဲ့စာတွေ ကျနော် ထပ်ရေးဖြစ်ဦးမယ် ထင်တာပါပဲဗျာ။ နားလည်စွာနဲ့ လာလာဖတ်နေတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။